[18+] Grotesque (2009)
The Cursed Lesson (2020) The Cursed Lesson 2020ဒီကားကတော့ ၂၀၂၀ခုနှစ်နိဝင်ဘာကထွက်ထားတဲ့ Horror ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ Horror ကားထဲမှာတော့ ဇာတ်လမ်းလေးကအရမ်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။လောကကြီးမှာ မိန်းကလေးတော်တော်များများက လှပမှုကိုမက်မောကြတယ်။ သင်ရော တစ်ရက်မှာ ရုတ်တရက်ကြီး ရှိရင်းစွဲအသက်ထက်ထက်ဝက်လောက်ငယ်သွားပြီး အရမ်းလှလာမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလှပမှုကိုရဖို့ သင်ဘာမဆို လုပ်မှာလား? ဒီထဲမှာတော့လောဘတွေ၊မနာလိုဝန်တိုမှုတွေနဲ့ အတ္တဆန်မှုတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြထားပြီး သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့အတူ ထိတ်လန့်ဖွယ်ခံစားရမှာပါ။ဒီကားမှာတော့ Jump Scare တွေထက် တွေးတွေးပြီး ကြောက်ရမယ့်အခန်းလေးတွေပါသလို တွေးတွေးပြီး ကြိုုက်ရမယ့် အခန်လေးတွေလည်း ပါတယ်ဗျ (အဆုံးသတ်က စာလေး ကြည့်လိုက်ရင် သဘောပေါက်ကြမှာပါ)ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဟိုဂျုံးဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လ်က အရွယ်ကျလာလို့ ကြော်ငြာရှင်တွေက မသုံးကြတော့ပါဘူး။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တာလည်း မနည်းတာမို့ နောက်ထပ်ခွဲစိတ်မှုတွေ လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာ သူ့အစား ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ မော်ဒယ်လ်က သူ့သူငယ်ချင်း ဖြစ်နေပြီး သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ယောဂသင်တန်းတစ်ခု တက်ဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဒီယောဂသင်တန်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ တက်လိုက်တဲ့လူတိုင်း ရုပ်ရော ကိုယ်ပါ နုပျိုလှပသွားကြတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတာကတော့ ..................အားလုံးပဲ တွေးပြီးကြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ယောကျ်ားလေး ပရိသတ်တော့ ကြောက်မှာထက် ကြိုက်တောင်ကြိုက်မလားပဲ ယောဂကျင့်နည်း အဆန်းလေးတွေလည်း မြင်ရမှာမို့ပါ။(ဖောင်းဒိုင်းရှူးရှဲ အခန်းတစ်ချို့ ပါတာမို့ ကလေးသူငယ်များ ကြည့်ရှုရန် မသင့်တော်ပါဘူး)File size… ...
[18+] Save Me (1994) ထူးဆန်းပြီး လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ မိန်းမလှလေးတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမနဲ့ အဆင်မပြေလို့ ကွဲရတော့မှာမို့လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ရုံးကဝန်ထမ်းတစ်ယောက် တွေ့ကြတဲ့အခါ..မိန်းမလှလေးရဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘဝကို ဘယ်လို ကယ်တင်ကြမလဲ...ဇာတ်ရှုပ်ကို ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ..မိန်းမလှလေးကရော ဘာလို့ ဒုက္ခရောက်နေတာလဲ ..မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးဘယ်လိုငြိကြမလဲ...ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကို အဖြေရှာကြည့်ကြရမယ့် ဇာတ်ကားပါ။ဇာတ်လမ်းကို ပီပြင်စေဖို့ အဖော်အချွတ်တွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတင်ဆက်ထားတာကြောင့်မိသားစုနဲ့အတူကြည့်လို့မရပါဘူး...ကလေးသူငယ်တွေမကြည့်ပါနဲ့...၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ကြည့်ကြပါ။ File size…(1.7 GB) and (1 GB) Quality…WEB-DL 1080p & 720p Format…mp4 Duration….01:30:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya AungTranslated by Moe Htet
[18+] Save Me (1994)
[18+] Girl Lost: A Hollywood Story (2020) Girl Lost,A Hollywood Story (2020) ===========================IMDb Rating. =. 7.8/10၀င်းဖေရေးတဲ့ ခင်မောင်ရင်နဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးဖတ်ရတော့ အဲ့ဒီထဲမှာ ခင်မောင်ရင်ကို ရုပ်ရှင်ပိုးကြွစေတဲ့ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်အကြောင်းဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာက ဘင်္ဂါလီအောက်ခြေ လူတန်းစားနဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစားအကြောင်း Triologyရိုက်ထားတယ်။ အဲ့ဒီသုံးကားကို ဒါရိုက်တာက ရိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ခင်မောင်ရင်က...." အဲဒီရှော်တိုး ဂျစ်ရွိုင်းဆိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီဒါရိုက်တာက ဘင်္ဂါလီအောက်ခြေလူတန်းစားနဲ့အလယ်အလတ် တန်းစားတွေအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ကောင်းကောင်း သိတော့ ဒီသုံးကားကို ရိုက်တယ်။ ကောင်း ကောင်းသိတယ်ဆိုတာက သူတို့အိမ်တွေက ဘယ်လို၊ သူတို့ယုံကြည်တာက ဘယ်လို၊ သူတို့ဓလေ့ထုံးတမ်းက ဘယ်လို၊ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုက ဘယ်လို၊ သူတို့ရိုးရာတွေက ဘယ်လို၊ သူတို့မိသားစုချင်း ဆက်ဆံတာက ဘယ်လို၊ ဘယ်လိုစားတာ၊ ဘယ်လိုသွားတာ၊ ဘယ်လိုစားတယ်၊ ဘယ်လိုအိပ်တယ်၊ ဘယ်လို ထိုင်တယ် အကုန်လုံး ရှော်တိုးဂျစ်ရွိုင်းက သိတယ်။ သိတော့ အဲဒီဟာကို ရိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာတုန်း။ သူသိပ်သိလို့ရိုက်တာ။ "လို့ဆိုတယ်။ဒီရုပ်ရှင်က ဟောလိဝုဒ်ပခြုပ်သည်မတွေ အကြောင်းသက်သက်ပါပဲ။ ဘာမှကိုမပါဘူး ဒီအကြောင်းသက်သက်ပါပဲ။အခု Girl Lostရော ၂၀၁၆ကထွက်ခဲ့တဲ့ Girl Lostရောက အမေရိကန်ဟောလိဝုဒ်က ပခြုပ်သည်မတွေ အကြောင်းသက်သက်ပါပဲ။ဒီနှစ်ကားလုံးကို ဇာတ်ညွှန်းရော ဒါရိုက်တာရောလုပ်ခဲ့တဲ့ Robin Bainက ဒရာမာ Genreသက်သက်မှာ ဒီလောက်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းကလည်း သူသိလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါရိုက်တာက အယ်အေဇာတိဆိုတော့ ဒါတွေကို‌အတော်တော့ကြုံဖူးပုံရပါတယ်။ ဒီလိုထင်ရလောက်အောင်လည်း သူ့ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ ပြသပုံတွေက ဟောလိဝုဒ်ပခြုပ်သည်လောကကို ခရေစေ့တွင်းကျပြထားတယ်။ အချုပ်ပြောရရင် 2016 ကကားရော အခုကားရော Rating‌တွေကောင်းတယ် ဒါရိုက်တာကလည်း သူရိုက်တာကို သူသေချာသိတဲ့သူဆိုတော့ ဂျင်းဖြစ်နေမှာတော့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ စိတ်ညစ်မခံနိုင်ရင်တော့ မကြည့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ သရုပ်ဆောင်တွေကအစ စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်။ သတိချပ်ရမှာက Nude Scene ...
[18+] Girl Lost: A Hollywood Story (2020)
[21+] My Girlfriend’s Older Sister,Misaki Honda [PPPD-531] Dark Side production မှ တင်ဆက်သည်။ဒီဇာတ်ကားကို Decensored Version နဲ့တင်ထားတာမို့ ဆင်ဆာမပါသလိုမျိုးတွေ မြင်ရဖို့ရှိပါတဘ်။This dude has been dating her girlfriend Erina for the last6months and onanight out drinking, she gets smashing drunk.He has to carry her back home and once in the house, he meets for the first time with Erina’s older sister, Misaki Honda. And exceptionally voluptuous and horny ...
[21+] My Girlfriend’s Older Sister,Misaki Honda [PPPD-531]